Bunjani ubudlelwane bokakrebe nabantu | Ngeentlanzi
Kwizihlandlo ezininzi kubonisiwe oko ubudlelwane phakathi kwabantu nookrebe bunokungavisisani. Ukusuka kubundlobongela bendalo yabo ukuya kukungabikho kwengqwalaselo evela kubantu abadadayo kunye nabaqubhi, ukudibana kwazo zombini ezi ntlobo kuneziphumo ezibi kwinani elikhulu lamatyala.
Uninzi lwabemi luhlala luloyika kakhulu ukucinga nje ukuba ookrebe bahlala elwandle, inxenye yoxinzelelo lwayo olubi kungenxa yesaga yefilimu IsiTiburonUkusukela ukuvela kwayo okokuqala ngo-1975, izigcawu ziye zaphalaza igazi ngakumbi nangokoyikeka.
Inyaniso, kwaye ngaphandle kokuba ayivakali imnandi kwaphela, kukuba ookrebe bayayiphendula indalo yabo kunye nethuku labo kwaye kunamaxesha ambalwa okuba bajonge ukuhlasela abantu. Ookrebe abanako ukucinga ukuba bayabathanda okanye hayi. Nangona kunjalo ngamanye amaxesha abantu babonakala benomsindo ngazo, umzekelo ocacileyo kukuloba okanye ukukhupha amaphiko abo kubangela ukuba bangakwazi ukudada okanye ukuphuma igazi ekufeni.
Ukusuka kwiYunivesithi yaseStellenbosch, uConrad Mattee uthi: “Ookrebe abanamdla ebantwini njengexhoba. Ookrebe abamhlophe abangaphantsi kweemitha ezintathu (eziphakathi kweminyaka emine ukuya kwemihlanu ubudala) batya kakhulu iintlanzi. Baye batshintshe amazinyo abo kwaye bafumane amazinyo abo amakhulu ahlengahlengiswe kwimfuyo yabo yaselwandle. Ukutya kwabo kuyatshintsha ngokwamaxesha onyaka, ukusuka kwiintlanzi ukuya kwizilwanyana ezanyisayo. Abantu abakhangeki njengezilwanyana zaselwandle ezisemanzini, kodwa ookrebe banomdla ngokwendalo, nto leyo ekhokelela ekudibaneni okungathandekiyo nabantu amaxesha ngamaxesha. "
Iinkcukacha ezithe xaxe -
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Ikhonkco phakathi kookrebe nabantu
Zithetha njani iintlanzi?